Maamulka Hirshabelle Oo Baaq u Direy Shacabka Hiiraan Iyo Sh/dhexe – Goobjoog News
Maamulka Hirshabelle Oo Baaq u Direy Shacabka Hiiraan Iyo Sh/dhexe
Maamulka Hirshabelle ayaa baaq ku aadan isku gurmashada abaaraha iyo wada qeybsiga daaqa waxa uu u direy shacabka ku dhaqan guud ahaan deegaannada uu maamulkaasi ka arrimiyo ee Hiiraan iyo Shabellaha Dhexe.
Madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay jiri doonaan xoolo dhaqato u naq raacday deegaanno weli aanu abaarta ku baahin, sidaasi darteedna laga doonayo bulshada deegaannadaasi ku nool iney soo dhoweeyaan dadka abaarta ka tagay.
Waxa uu sheegay in mudada la isla joogayo oo yar la doonayo iney isku dulqaataan dadka, islamarkaana isla wadaagaan wixii kheyraad ah ee gobolladaasi yaalla.
“Abaaraha ka jira Hirshabelle aad bay u ballaaran yihiin, wabigii Biyo maleh, roobna ma di’in, waxaan rabaa inaan ugu baaqo umadda ku nool Hirshabelle deegaannada uu ku dambeeyo daaqa hala soo dhoweeyo hana la isku sabro cid walba kheyrka wuu imaan doonaaye” ayuu yiri madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle.
Abaarta ka jirta gobollada dalka ayaa saameyn ku yeelatay dadka iyo duunyada, meelaha qaar waxaan jirin biyo ay dadka cabaan.
Wabiga Shabelle oo mara gobollada hirshabelle ayaa maalmahan dambe lasoo sheegayaa inuu ka biyo yareeyey sidii hore, waxayna taasi sii adkeyneysaa xaaladdii biyo la’aaneed ee dadka haysatay.
Diyaarado dagaal oo duqeeyay deegaanka SHaw ee gobolka Hiiraan